Uzibona eya kude owemidlalo yomoya | News24
Uzibona eya kude owemidlalo yomoya
ISITHOMBE: SIthUNYELWE Umbhali wemidlalo yomoya uMnu Sebastian Jiliuthi kusekude lapho eya khona, njengoba enesifiso sokubhala imidlalo kamabonakude.
YIZE egogode emkhakheni ongajwayekile wokucwaninga izinkanyezi (astrology), uzibona ebhala imidlalo kamabonakude owesilisa waseMgungundlovu umdlalo wakhe womoya osanda kuzwakala emsakazweni UKhozi FM. UNOKULUNGA NGOBESE uxoxisane noScelo Sebastian Jili ongowokudabuka endaweni yaseMafakatini.
Lo mdlalo womoya osihloko sithi ‘Wawuvumelani’? uneziqephu ezingama-30 kanti uqale ukuzwakala kulesi siteshi ngesonto eledlule. Ubuciko bokubhala busuka kude kuJili njengoba ngaphambilini eke abhalela namaphephandaba ahlukahlukene okubalwa kuwona nengosi yamahlaya. Kumanje ucwaninga izinkanyezi kwelinye lamaphephandaba ansukuzonke esiZulu. Ngaphandle kwalo mdlalo, useke wabhala nemidlalo yomoya eminingi ebidlalwa emisakazweni yemiphakathi. UJili uthe yize ubenikwe izihloko eziningi angabhala ngazo, ukhethe ukubhala ngesihloko sokudayiswa komzimba (prostitution) okuyinto abantu abaningi abasabayo ukukhuluma ngayo.
Uthe: “Ngikhethe lesi sihloko ngoba ngibona intsha eningi iba yizisulu zalo mkhuba. Abantu abasha bayazithanda izinto eziwubukhazikhazi, ngakho kulula ukulutheka ukuthi bangene kulo msebenzi ukuze bathole imali esheshayo.
“Ngalo mdlalo ngifisa ukujivaza lo mkhuba nokubakhuthaza ukuthi noma ngabe kuthiwa izimo sezibacindezele kanjani, basangavuka bazithathe.”
Ekhuluma ngothando lwakhe lokubhala uthe: “Ngo-1992 ngaqokwa njengovelele ekubhalweni kwezindaba ezimfushane elinye lamaphephandaba esiZulu, okulapho engabona khona ukuthi nginothando futhi nginesiphiwo sokubhala. Ngibe sengithola nethuba eliyingqayizivele lokubhalela amaphephandaba ahlukene, yize ngangingakuqeqeshelwanga dawo ukubhala.”
UJili oneziqu emkhakheni wokucwaninga ngezinkanyezi uthe wakhetha lo mkhakha ngoba enentshisekelo ngokufunda ngendlela abantu abaziphatha ngayo. Uqhube wathi yize eqeqeshelwe omunye umkhakha, luselude uhambo lwakhe emkhakheni wokubhala, njengoba ngelinye ilanga ezibona engumbhali wemidlalo kamabonakude.
“Ngizoqhubeka ukubhala imidlalo yomoya kodwa eminyakeni embalwa ezayo nginesifiso sokuzibona sengibhala nemidlalo kamabonakude eyobukwa umhlaba wonke.”
Uyale ababhali abasafufusa wathi: “Kubalulekile ukuthi usondelane nabantu abanalo ulwazi kwezokubhala, ubahluphe ngokuhlale njalo ufuna ulwazi. Ukuzethemba nakho kubalulekile ukuze uphumelele, ngoba uma uzenyeza ulwazi lwakho luzoba lufushane ngoba awuzukwazi ukuhlanganyela nabanye.”
Ngaphandle kokubhala uphinde abe nenhlangano engakhokhelwa ebizwa nge-Nkanyezi Development Agency, okumanje isisize abafundi abahlwempu bezikole ezahlukahlukene endaweni yaseVulindlela abangaphezu kwama-50 ngomfaniswano wesikole nokudla.
UJili uphethe ngokuthi akubalulekile ukuthi umuntu usukaphi kodwa okubalulekile ukuthi uyaphi